नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) को १० औँ महाधिवेशनको सन्देश - GBM
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) को १० औँ महाधिवेशनको सन्देश
२०७८ मंसिर २१ gautam buddha sandesh	0 Comments
विश्वराज बराल (अनुप)
देशको प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) को १० औं महाधिवेशन यही मंसिर १० देख १४ गतेसम्ममा चितवनमा सम्पन्न भएको छ । नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशनको सहभागिको हिसाबले जे देखियो, जे बुझियो, जे सुनियो यस्तै विषय र सवालमा यआ केही चर्चा गर्न लेखिएको छ । पूर्व माओवादी पार्टीको विभिन्न समयका धेरै ठुला केन्द्रिकरणमा सहभागि भएर आएको मेरो लागि यो अधिवेशन नयाँ नै थियो । नेकपाको निरन्तरताको अभिभारा पनि यो पार्टीमा संगठनात्मक हिसाबले एमालेको ठुलो हिस्सा छ, भने पूर्व माओवादीको सानो हिस्सा तसर्थ पनि मेरो लागि यो महाधिवेशन नयाँ हुने नै भयो । अधिवेशनको उद्घाटन सत्रको तयारीदेखि बन्दसत्रको मतदानसम्म प्रत्यक्ष सहभागी भईयो । बाहिरिएका विभिन्न कुरा सुनियो । मेरो वास्तविक अध्यनमा विचार संगठन र व्यवहारको हिसाबले यो अधिवेशन कस्तो रहयो भनने सवालमा यहाँ राख्नेछु ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) जनमनको हिसाबले ठुलो हुँदाहुँदै पनि विभिन्न षडयन्त्रको कारण यतिबेला यो पार्टी सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा आइपुगेको छ । यी षडयन्त्रलाई परास्त गर्ने मुख्य शक्ति जनता हुन अर्थात पहिलो शक्ति जनता हुन भन्ने बुझाईका साथ र जनतालाई सही कुरा बुझेपछि ती सबैखाले षडयन्त्रलाई पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाईका साथ पनि पार्टी केन्द्रले देशभरका पार्टी सदस्यको मुल हिस्सा उद्घाटन सत्रमा सहभागि गराउने निर्देशन गरेको थियो । यसको लागि पहिलो चुनौति थियो यसको व्यवस्थापन यसको लागि पार्टी केन्द्रले हरेक पार्टी सदस्यसंग रु. १ सय उठाउने कुरा ग¥यो भने स्थानी कमिटीले प्रतिव्यक्ति ५००÷१००० संकलन गर्ने कुरा गरेका थिए । यसकोविपरीत म बन्दसत्रमा रहँदा बाहिरिएका विपक्षीहरुको टिप्पणी सुनिरहेको थिए, पैसा पार्टीसंग जति थियो भ्रष्टाचार गरेका थिए त के भयो जनता उतार्न भन्ने कुरा गरिरहेका थिए । यति मात्र होइन उद्घाटन सत्रको दिन एकातिर चितवनको सौरहादेखि नवलपुरको गैडाकोटसम्म जनसागर थियो भने कतिपय विपक्षीहरुले ५०÷६० हजार जनता भन्दै थिए । नेकपा एमालेले ज.ब.ज ज.ब.ज भनेको सुनेको थिए । साँच्चै जसरी पार्टी पंक्तिकै तयारीमा र सहभागितामा जसरी यो अधिवेशनमा जनता र पार्टीलाई अधिवेशनमा उतारियो र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जसरी जनता र कार्यकर्तालाई केन्द्रमा राखेर सम्मार गरेर सम्बोधन गर्नुभयो साँच्चै यो पार्टी जनआधारित पार्टी हो भन्ने मेरो बुझाइ भयो । म तिलोत्तमा नगरपालिका–१४ को बासिन्दा यस वडाको शाखा पार्टीले म र मेरो जीवन साथीसंग गरेर रु. २ हजार संकलन ग¥यो भने शाखा अध्यक्षले आर्थिक अवस्था अनुसार हरेक पार्टी सदस्यसंग ५ सयदेखि ५ हजारसम्म संकलन गर्नुभयो । त्यो पैसा बाटा ३ वटा ठुला बसका सहभागिलाई मासु पनिर सहितको खानाको समेत तयारी गर्नुभयो ।
माक्र्सदेखि माओ र मदन भण्डारीले समेत विचार राजनीति र व्यवहारमा जनताबाट लिएर जनतालाई दिने कुरा पटकपटक गर्नुभएको थियो । यो पार्टीमा यसको उचित संयोजन भएको देखियो । हरेक पार्टी सदस्यले अनिवार्य रुपमा लेबी र नविकरण शुल्क तिरेर सदस्यता नविकरण गरेको देखियो । त्यो रकम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म उचित बिनियोजन भएको गरेको पाइयो । अधिवेशन अगाडि ८ लाख ५० हजार पार्टी सदस्यले न्यूनतम ४५५ रुपैयाँ बुझाएर सदस्यता नविकरण गर्नुभएको थियो । यसबाट ठुलो रकम जम्मा भयो । हरेक जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रुपमा तलब सुविधाको १० प्रतिशत पार्टीमा बुझाउने प्रचलन स्थापित छ । यसबाट देखियो भोगियो यो पार्टीले आफ्नो कार्यक्रमको लागि कुनै दलाल तथा नोकरशाहसंग चन्दा लिनुपर्ने देखिएन । उद्घाटन सत्रमा त्यत्रो मानव सागर भएर पनि त्यो सागर अराजक थिएन, उदण्ड थिएन, अत्यन्त अनुशासित रुपमा त्यो मानवसागर संयमतापूर्वक कार्यक्रममा सहभागि भयो ।
नारायणगढबाट बुटवल पुग्न १२ घण्टा लाग्यो तर जनमानस अनुशासितपूर्वक सहभागी भएर फर्कियो । यो पंक्ति केपि ओलीको नेतृत्वमा मर्न तयार देखियो ।
उद्घाटन सत्रमा साउण्ड सिस्टममा त्रुटी देखियो । अरु सक्ने जति चुस्त व्यवस्थापन देखिन्थ्यो । उद्घाटन सत्रमा दुई सन्देश देखियो एउटा एमालेसंग जनता छ, अर्को एमाले पार्टी जनआधारित र अनुशासित पार्टी हो भन्ने कुरा पनि देखियो । यति मात्र होइन यो पार्टी आत्मनिर्भर छ भन्ने पनि देखियो । पार्टी केन्द्रले चन्दा नमाग्ने निर्देशन गरेको थियो यसलाई पार्टी पंक्तिले पूरै मानेर सदस्यहरुबाटै आर्थिक संकलन गरेर कार्यक्रममा सहभागी भयो । यसले पार्टीप्रतिको स्वामीत्व बढ्यो र पार्टी थप बलियो भएको देखियो । लोकतन्त्र, जनवाद, प्रजातन्त्र भनेको जनतालाई केन्द्रमा राख्ने भन्ने कुरा हो । यो भोटिङ्ग मात्र होइन भोटिङ्ग एउटा रुपको मुल कुरा लोकतन्त्र जनवाद भनेको जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र अनुमोदनद्वारा काम गर्ने कुरा हो । यो सवालमा एमालेको १० औं अधिवेशन पूर्णतः सफ बनेको छ र यस पार्टीलाई थप मजबुत बनाएको छ ।
नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन पहिला नै सम्पन्न भएको थियो । यसले आफ्नो आगामी ५ वर्षे नीति, विधि पास गरिसकेको थियो । त्यो पनि पार्टीका करिब ७ हजार प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागितामा भव्य रुपमा यसमा जुन हिसाबले जनवाद लोकतन्त्रको प्रयोग भयो । त्यो अत्यन्त उच्च थियो । तसर्थ यो १० औँ अधिवेशनको मुख्य कार्यभार सांगठनिक नेतृत्व छनौट गर्नु थियो । संगठनात्मक हिसाबले एमालेको यो अधिवेशनले पार्टी भित्रका विभिन्न प्रवृत्ति भए तापनि मुलतः ३ वटा एमालेभित्रको केपी ओली नेतृत्वको एउटा मुल प्रकृति अर्को पूर्व माओवादीको प्रवृत्ति । यी तिनै पंत्तिः प्रवृत्तिको उचित संयोजनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै यो अधिवेशनले विधानलाई केही सम्बोधन गरेको छ । नेतृत्वको टिमले पार्टीभित्रको सबै जाति, सबै क्षेत्र, सबै भुगोल, सबै प्रवृत्तिलाई सम्माजनक संयोजन र नेतृत्वको छनौटको लागि ११, १२, १३ तीन दिन लामो र सघन छलफल ग¥यो । तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यक्रम भएन तर पनि २ हजार २ सय जति प्रतिनिधि र त्यही संख्या हाराहारीको अरु बाहिर रहेका दर्शक शुभचिन्तकले कुनै प्रकारको अराजकता देखाएनन् । एक जना राष्ट्र सेवक प्रहरी भन्दै थिए अरु पार्टीको अधिवेशन भए त्यहाँ कति लफडा हुने थियो, कति बियरका बोत्तल कतिका टाउको फुट्ने थिए तर यहाँ केही छैन ।
अत्यन्त शान्त छ यस्तो पो पार्टी । चितवनको सौराह एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल जुन रातभर जाग्यो तर कुनै तनाव महसुस गरेन । मलाई त्यो बन्दसत्र कार्यक्रममा रहँदा आएका ४ वटा फोन विशेष स्मरणीय थिए । एउटा फोन मेरो ८२ वर्षिय बुवाको थियो उहाँ भन्दै हुनुहन्थ्यो बाबु त्यहाँ त गोली चल्यो रे ख्याल गर है के हो ? अर्को फोन थियो सर भीम रावलत अपहरणमा परेको हो र अर्को फोन थियो ज्यान जोगाउनु है, अर्को फोन १४ गतेको थियो त्यो पनि गोली चल्यो रे के हो ? गोली त के त्यस अधिवेशनमा कुनै धकेलाधकेल चर्काचर्की भएन प्रतिनिधिहरु दिनभर रातभर नेतृत्वलाई कुरे तर कुनै आवेश त्यहाँ देखिएन । कमरेड भीम रावल लगायत केही कमरेड लोकतन्त्र भनेको मात्र मतदान नेतृत्व छनौटको लागि मतदान गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्थ्यो भने हामी ९५ प्रतिशत मतदाताहरु लोकतन्त्र भनेको जनताको कार्यकर्ताको राजीखुसी साथ सहभागिता र समर्थन हो भनिरहेका थियौं ।
फरक यति थियो जतिबेला भीम रावल अपहरणमा पर्नुभयो रे भन्ने फोन आउँदा भीम रावल र ईश्वर पोखरेल प्रतिनिधिहरुसंग हलमा फोटो खिचाउँदै हुनुहुन्थ्यो ।
लोकतन्त्र र जनवादलाई बुझ्न दुईतिरका छन् । एउटा अराजक र स्वच्छन्द खाले तरिका अर्को, अनुशासित र वैज्ञानिक तरिका । वास्तविक लोकतन्त्र त्यो हो, जहाँ सचेत मान्छेहरुले स्वविवेक प्रयोग गरेर कुनै प्रलोभन र दवावरहित वातावरणमा खुसी साथ ताली पिटेर आफ्नो नेता प्रतिनिधि छनौट गरुन त्यो हो । जनवाद अर्थात लोकतन्त्र दवाव, प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर बन्द कोठामा लुकेर हुने मतदान कसरी जनवाद र लोकतन्त्र हुन्छ ? बन्द सत्रको २ हजार २ सय प्रतिनिधिको स्वविवेकपूर्ण र खुसीराजी समर्थनको कारण बन्दसत्रमा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षले पार्टीभित्रका सबै क्षेत्रका र सबै प्रवृत्ति समेटेर हुलमा एउटा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । त्यो प्रस्तावलाई हलले खुसीराजीले गडगडाहट तालीले समर्थन गरेको थियो तर कमरेड भीम रावल लगायत २÷५ प्रतिशत कमरेडहरुले अस्वीकार गर्नुभयो । त्यही २÷५ प्रतिशतको मतको समेत सम्मान गरेर नेतृत्व र प्रतिनिधिले मतदान स्वीकार गरे यो भन्दा ठुलो लोकतन्त्र जनवाद के हुन सक्छ ? केही बौद्धिक अराजकतावादीहरु र विरोधीहरुले एमालेभित्र केपी ओलीको शासन छ । निरंकुशता छ भन्ने गर्दछन् । यो भन्दा वकवास तर्क केही हुन सक्दैन । जुन पार्टीको अधिवेशनको हलमा हरेक प्रतिनिधिले स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न र आफ्नो मत राख्न र आवश्यकता ठानेर माग गरे आफू र आफ्नो मत उपर मत माग्न मतदान गराउन पाउँछ भने त्यहाँ कसरी निरंकुशता हुन्छ यो तर्क कुन सारमा एमाले विरोधी तर्कबाहेक केही होइन ।
जुन पार्टी राष्ट्रियता र जनवादको आधारमा खडा भएको जनआधारित जनअनुमोदन पार्टी हो । जुन पार्टीमा हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेसको पछि लागेर अदालत पुग्नेहरुलाई पदाधिकारी बनाइन्छ, जुन पार्टीमा हिजो सशस्त्रको धारबाट आएको पंक्तिलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा सम्मानजनक स्थान दिइन्छ त्यो पार्टी र केपि ओली कसरी निरंकुश हुन सक्छन् ? केपी ओली र एमालेलाई निरंकुश भन्नेहरु एमालेको मजबुतिबाट आतंकित भएको नेपाल र नेपाली विरोधीबाहेक अरु केही होइनन् ।
कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा बनेको नेकपाले नेपालमा गर्न खोजेको क्रान्ति आन्तरिक हिसाबले सामन्तवाद विरोधी क्रान्ति हो । ०६२÷०६३ मा सम्पन्न भएको आन्दोलनले नेपालमा रहेको सामन्तवादलाई मूलतः पराजित गरेको छ बाँकी रहेको सामन्तवादलाई संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण प्रक्रियामा एमालेले भने अनुसार समाजवादको आधार निर्माणको प्रक्रियामा पुरा गरिनेछ ।
जहाँ सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्वि हुनेछ । अर्को पार्टी साम्राज्यवाद विरोधी जुन क्रान्ति हो । त्यो केपी ओलि नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको छ ।
साम्राज्यवाद÷विस्तारवाद विरोधी भनेको सबैखाले वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नेपाल भन्ने हो । यसको लागि कमरेड केपी ओलिले भनेझै नेपाल कुनै अर्को राष्ट्रको छोटो भाइ होइन यो एउटा अलग राष्ट्र हो । हामी सम्मानजनक सहअस्तित्व पूर्ण, पञ्चशिलको सिद्धानतमा आधारित वैदेशिक सम्बन्ध चाहन्छौ भन्ने विचारद्वारा निर्देशित हुन्छ । सोहीअनुसार कमरेड केपी ओली नेतृत्वको कारणले चीनसंग पारवाहन सम्झौता गरेर एउटा देश निर्भर वैदेशिक सम्बन्धबाट देशलाई मुक्त गर्नु भएको छ, मात्र होइन १९५० को नेपाल भारत सम्झौतालाई परियोजन समेत गर्नुभएको छ । त्यसै गरी चुच्चे नक्सा निकालेर कमरेड केपी ओली सरकारले नेपालमाथि हुने सबैखाले भौगोलिक र साम्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । राम नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर नेपालमा दिएका सबैखाले सांस्कृतिक हस्तक्षपको विरुद्वमा आफुलाई उभ्याउनु भएको छ । चीनसंगको पारवाहन सम्झौताले आर्थिक रुपले हुने वैदेशिक हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिएको छ । चीनसंगको पारवहन सम्झौताले आर्थिक रुपले हुने वैदेशिक हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिएको छ भने भौगोलिक हुने विदेशी हस्तक्षप अस्वीकार गरिएको छ । यो साम्राज्यवाद÷ विस्तारवाद विरोधी क्रान्ति होइन । प्रचण्डहरुले दस्तावेजमा र बलिदानमा सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्ति गरे कमरेड केपी ओलीले व्यवहारमा गर्दै हुनुहुन्छ । स्वाधिनताको जगमा खडा भएको समृद्व नेपाल सुखी नेपाली भनेकै समाजवाद हो भनेर कमरेड केपी ओलीले भन्नुभएको यो सैद्वान्तिक र वैचारिक दुबै हिसाबले सही दृष्टिकोण हो ।
नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशन जनवाद र लोकतन्त्रको उच्च प्रकारको संयोजन हो । जहाँ जनता आफ्नै लगानीमा उत्साह र अनुशासितपूर्वक सहभागि भए । यो पार्टी साँच्चै जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी हो । जनसहभागिता र कयौं समाचारका बाबजुद जनताको संयमतापूर्वक सहभागिताले यो सन्देश दिन्छ यो पार्टी अनुशासित छ, जनताको भर एमालेमै छ, अबको नेपाल र नेपालीको नेता एमाले हो । अर्को सन्देश भनेको एमाले पार्टी सबै कम्यूनिष्टहरुको नेता पार्टी हो यहाँ सबैको जीवन र अस्तित्व सुरक्षित छ सोही अनुसार नेताहरु छानिएका निर्वाचित भएका छन् । तसर्थ विसर्जनको यात्रामा सहभागि नहुन सबै कम्युनिष्टहरुलाई यो पार्टी सम्मेलनले आग्रह गरेको एउटा थप महत्वपूर्ण व्याख्या यो । अधिवेशनमा गर्नुभयो त्यो भनेको पार्टीभित्र उच्च प्रकारको समझदारीसहितको व्यापक एकतामा आधारित सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट गर्ने त्यसो गर्दा एकतामा जोड गर्ने र विरोधीहरुसंग प्रतिष्पर्धामा जोड गर्ने । ज.ब.ज भनेकै पार्टीभित्र चुनाव गरेर नेतृत्व छनौट गर्नु हो । भन्ने कुरा एकाङ्की बुझाई हो भनेर ज.ब.ज.को थप व्याख्या र विकासतिर पार्टीलाई लैजान खोज्नु भएको छ । पार्टीभित्र नियमित चुनाव र मतदानले पार्टीमा गुटलाई स्थायीत्व दिन्छ । जसले पार्टीभित्रको संघर्ष अस्वस्थ हुन्छ र पार्टी कमजोर हुन्छ भन्न खोजिएको छ । बाध्यता र अनिवार्य आवश्यकतामा चुनाव हो भन्ने कुरा अगाडि सारेको छ । यस प्रकार नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशन सबै कोणबाट एतिहासिक रहेको छ मात्र होइन नेपालको समाजवादी आन्दोलनको नेता पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने कुरा पनि स्थापित गरेको छ ।
← महाधिवेशनमा धेरै मानिस जम्मा गर्दैनाैँ, नागरिकलाई दुःख दिँदैनाैँ : देउवा
मेरो एकवर्षको सेवामा सरुमारानीको बेरुजु शुन्य बनाएको छु →
दर्शनको समाजशास्त्रीय अध्ययन